Iyo matrix yehumwari - kubatanidza nguva uye nzvimbo, zvishamiso uye zvinotenda (audio) - afrikhepri nheyo
Muvhuro, Gunyana 21, 2020
kugashira AUDIO BOOK
The Divine Matrix - Kubatanidza Nguva uye Space, Zvishamiso uye Zvinodavirwa (Audio)
LKuroora kwesainzi uye kwemweya kungaburitsa zvakavanzika zvakapfuura zvenguva yedu yakapfuura, uye kugadzirisa matambudziko ari kukanganisa ramangwana redu?
Sezvo nhamba inowedzera yezvirevo ichiratidza, mhinduro kumubvunzo uyu ndeye "hongu" inokurudzira. Joinana naGregg Braden parwendo urwu rwakashamisa runosanganisira sainzi, pamweya uye zvishamiso kuburikidza nerurimi rwematrix ehumwari. Zvichangobva kuwanikwa zvinopa humbowo husingarambike hwekuti matrix akatorwa nePlckck aripo zvechokwadi. Ichi chingave here chinorasika chinongedzo paruzivo rwedu, icho chinoumba mudziyo wezvinhu zvakasikwa, bhiriji pakati pekufunga kwedu neicho chaicho, uye girazi, munyika yedu?
Kuti tisvitse simba rematrix muhupenyu hwedu, zvakakosha kuti tinzwisise kuti zvinoshanda sei uye kutaura mutauro wavanonzwisisa. Kweanopfuura makore makumi maviri, Gregg Braden akaongorora izvi. Kubva kumamonari ari kure eIjipiti, Peru neTibet, kune zvinyorwa zvakakanganwa izvo zvakagadzirwazve neChechi yekutanga yeChristian, chakavanzika chemwari matrix chakaendeswa kwatiri mumutauro wekodhi nehutsika hwedu hwakakosha uye sainzi inosimbisa. nhasi.
Iyo matrix yehuMwari: Kubatanidza nguva nenzvimbo, zvishamiso uye zvitendero
1 nyowani kubva pa17,95 €
Tenga 17,95 €
kubva munaGunyana 21, 2020 4:45 AM
Publication Date 2019-04-10T20:15:33Z
urongwa Cheka shanduro
chikamu AUDIO BOOK
Tarisa Usambodzokera kumashure 3 (2016)
Monomotapa, umambo hwekuAfrica hwepakati pekare
Njanji yekubatanidza nyika shanu dzeWest Africa